आइतबार सार्वजनिक हुँदै नागरिक एपको फुल भर्सन, के आउला नयाँ फिचर ? - Parichaya.com
आइतबार सार्वजनिक हुँदै नागरिक एपको फुल भर्सन, के आउला नयाँ फिचर ?
By परिचय	 On १८ बैशाख २०७८, शनिबार १४:३५ 0
आउँदो आइतबार सरकारले राष्ट्रि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउँदैछ । त्यसै सन्दर्भमा नागरिक एप औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नागरिकले हेलो सरकारमार्फत विभिन्न सार्वजनिक तथा सरकारी सेवाको विषयमा नागरिक एपमार्फत नै गुनासो टिपाउन सकिने सुविधा छ ।
आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितले गरे आत्महत्या